offline_bolt Mepụta ibe AMP
power WordPress AMP ngwa mgbakwunye
power PHP AMP ngwa mgbakwunye
power Blogger AMP ndebiri
warning Ngwa AMP anaghị arụ ọrụ?
extension Embed Ememe YouTube Tag
extension Fanye akara mkpado AMP
extension Ọrụ AMP dị ndụ
Okpokolo agba na AMPHflix (site na 'amp-iframe') nakweere ọdịnaya nke nwere njikọ HTTPS ezoro ezo.
Ndewo ma kelee gị maka ọbịbịa gị! - A na-eji kuki iji hazie ọrụ nke "www.amp-cloud.de". Nke a nwekwara ike ịgụnye ọrụ na ọdịnaya sitere na ndị na-eweta ndị ọzọ, dịka iji nye ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ọdịnaya vidiyo, kamakwa iji mee ka ndị na-enweghị aha, nyocha ọnụ ọgụgụ nke arụmọrụ webụsaịtị wee ka mma yana kwụọ ụgwọ weebụsaịtị maka ịdị adị nke ibe a. nkwado. Dabere na ọrụ ahụ, enwere ike ịnye gị data nke ndị ọzọ ma hazie ha. Nwere ike ịchọtakwu ihe banyere iji na nhọrọ maka ịgbanwe ntọala kuki gị ebe a: Ozi nchekwa data